भोलि बैशाख २८ गते शनिवार तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् तपाईको राशीफल !
भोलि मिति बिक्रम संवत २०७६ साल बैशाख महिनाको २८ गते शनिवार तद अनुसार सन् २०१९ मे ११ तारिख तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस तपाईको भोलिको राशिफल !
मानसिक रुपले अशान्तिको अनुभव हुनेछ। कसैले भावनात्मक डेस पुर्याउने भएकाले बिशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने छ। बोलीको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले बाणी तथा व्यवहारमा संयमित रहनु पर्ने छ। माताको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताउने छ। आर्थिक कारोवार नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। बिद्यार्थीवर्गका लागि समय मध्यम खालको रहेको छ।
पारिवारिक वातावरण सुखमय बित्नेछ। मानसिक उत्साहमा वृद्धि भएर जानेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। आर्थिक लाभको सम्भावना रहेको छ। स्वादिष्ट भोजनको अनुभूति हुने छ। समग्रमा तपाईको लागि भोलिको दिन सुखमय बित्ने देखिन्छ।
कार्यमा ढिलासुस्ती हुनेछ। आर्थिक आयोजनाका लागि समय त्यति अनुकुल रहेको छैन। नोकरी तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा उच्च अधिकारी प्रसस्त साथ र सहयोग पर्प्त भएर जानेछ। इष्टमित्र तथा परिवारजनका साथमा दिन सुखमय बित्ने देखिन्छ।
घरायसी बातावरण उल्लासमय रहने छ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। आकस्मिक यात्राको सम्भावना रहेको छ। स्वादिष्ट भोजनको अनुभूति हुनेछ। आर्थिक लाभ हुने संम्भावना रहेको छ। कार्यमा सफलता मिल्नेछ।
मानसिक द्विविधाका कारण महत्वपुर्ण निर्णय लिन सकिने छैन। बिशेषगरि स्त्री वर्गबाट सावधान रहनु पर्नेछ। अनावश्यक वादविवादमा फस्ने सम्भावना रहेको छ। अनावश्यक खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ। स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ। दाम्पत्यजीवनमा खुसियाली छाउने छ।
मनोरन्जनात्मक कार्यमा दिन व्यतित भएर जानेछ। सोचेका हरेक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। इष्टमित्रका साथमा रमणीय स्थानमा घुमन जाने अवसर मिल्नेछ। सनातन सुख मिल्नेछ। धार्मिक क्षेत्रमा मन जानेछ।
नोकरी तथा व्यवसायको क्षेत्रमा अनुकुल समय रहेको छ। कार्यमा उच्चाधिकारीको साथ र सहयोग प्राप्त भएर जानेछ। नोकरीमा पदोन्नतिको योग रहेको छ। परिवारमा उल्लासमय वातावरणको सिर्जना भएर जानेछ। माताको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ। सरकारी कार्यबाट सफलता मिल्नेछ।
नोकरी तथा व्यवसायको क्षेत्रमा खासै अनुकुल समय रहेको छैन। शारीरिक थकानको अनुभूति हुनेछ। स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ। सन्तान सुख मिल्नेछैन। महत्वपुर्ण कार्यको लागि उचित निर्णय लिन नसकीइला। अनावश्यक खर्चको मात्रामा बृद्धि भएर जानेछ। छोटो यात्राको सम्भावना रहेको छ।
नया कार्यको थालनी गर्ने उचित समय रहेको छैन। स्वास्थ्य खासै अनुकुल रहेको छैन। खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ। बिरामी व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने छैन। भगवान ध्यान भक्तिमा लाग्नाले हरेक कार्य सफलतपुर्वक सम्पादन भएरजानेछ।
व्यवसायिक क्षेत्रमा ब्यापारमा वृद्धि भएर जानेछ। आयआर्जनका नया स्रोतहरु खुलेर जानेछ। सामाजिक क्षेत्रमा मान प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। छोटो दुरीको यात्रा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आध्यात्मिक कार्यमा मन जानेछ।
कार्यमा सफलता मिल्नुका साथै यश कृति प्राप्त भएर जानेछ। परिवारका साथमा आनन्ददायी समय बित्नेछ। स्वादिष्ट भोजनको अनुभूति हुनेछ। नोकरीमा सफलता मिल्नेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ।
सिर्जनात्मक क्षेत्रमा मन जानेछ। लेखन तथा साहित्यको क्षेत्रमा मन जानेछ। बिद्यार्थीवर्गका लागि समय निकै फलदायी रहेको च। परोपकारमा मन जानेछ। धार्मिक कार्यमा सहभागी हुने सु अवसर मिल्नेछ। समग्रमा मिन राशी हुने हरुका लागि भोलिको दिन अति नै लाभदायी रहेको छ।
प्रकाशित : शुक्रबार, बैशाख २७, २०७६१४:१२
भोलि बैशाख ३० गते सोमबार, तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् तपाईको राशीफल !